Visual Arts Comic Books
Tia tena ratsy ny olon-drehetra. Raha tsy misy ireo mpanafika be dia be, sao dia misy superhero mihitsy aza ? Na iza na iza dia mety ho ratsy, fa mba heverina ho mpanakorontana, tokony ho tsy manan-tsiny, mahery, ary indraindray, adala diso. Jereo ny lisitr'ireo fahavalo ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Rehefa miseho i Galactus, ilay mpihinan'izao tontolo izao, dia lasa olan'ny olon-drehetra izy. Miaraka amin'ny andian-jiolahim-boto mahery avy amin'ny cosmic eo akaikiny, Galactus no ilay ratsy fanahy hikapoka azy. Raha tsy izany, ny vokatra dia tsy fehezin'izao tontolo izao, fa ny fandringanana an'izao tontolo izao. Namotika ny tontolo tsy tambo isaina i Galactus ary namono olona an'arivony tapitrisa. Tsy hijanona mihitsy ny hanoanana ary noho izany dia tsy handrava azy.
Genius, filoha teo aloha, tomponandraikitra mpanao heloka bevava, mpandraharaha, sociopath. Ny andian-jiolahimboto Superman iray dia eo akaikin'ny tendron'ny lisitry ny fahavalo manerantany tsara indrindra. Na dia tsy manana hery mahagaga, hery mahery vaika, na zavatra hafa aza i Lex, dia tsy mihoatra noho ny fahaiza-manaony sy ny tsi-fahombiazana tanteraka. Aza tonga amin'ny faritra ratsy. Raha manao izany ianao, dia afaka manantena ianao fa tsy haharitra ela. Bebe kokoa "
Ny Yin amin'ny Yang Profesora X , ny Magneto dia tsy hitsahatra mandra-pahatongan'ny maha-olona manana ny toerany ara-drariny, ao ambadiky ny an'ny hazakazaka ambony indrindra manerantany, ireo mutants. Magneto dia mpitarika vondron'olona maromaro izay manana ny iraka tokana hanova izao tontolo izao izay misy ny mambra manjaka ary ny olombelona dia tavela eo amin'ny lalan'ny evolisiona. Ankoatr'izay fa izy no iray amin'ny ankamaroan'ny, raha tsy ny mahery vaika mahery indrindra amin'ny universe Marvel, dia i Magno no iray amin'ireo mpanao ratsy indrindra, izay nampijaliana nandritra ny fotoana rehetra.
Ny joker dia adala. Angamba izany no tena manintona an'io toetra io. Ny fahantrana, ny moraly, ny fomba fisainana ary ny toetra hafa rehetra dia mivoaka eo am-baravarankely rehefa mieritreritra ny Joker. Amboary ny fahamendrehany amin'ny fahaiza-manaony miaraka amin'ny akora simika misy poizina, ary manana ny fametrahan'ny olona tsy fantatra ianao izay mety hitondra ireo olona manodidina azy handohalika. Bebe kokoa "
William Tung avy any Etazonia (CC BY-SA 2.0) / Wikimedia Commons
Ny mpitondra an'i Latveria dia iray amin'ireo fahavalo lehibe indrindra an'i Marvel. Ny fahiratan-tsainy sy ny toetran'ny zavakanto mystika dia mahatonga ity lehilahy ity ho iray amin'ireo hery matanjaka indrindra amin'ny Universe Marvel . Ny hetahetany amin'ny fitondran'izao tontolo izao dia mifaninana fotsiny amin'ny hanoanana hijerena an'i Reed Richards maty sy henatra. Victor Von Doom dia tena ratsy fanahy tsy tianareo hotratrarina.
Mihevi-tena, mahery, ary maniacal ny rehetra dia tonga ao an-tsaina ny eritreritra iray momba ny Venom. Ny venom dia tsy olona ho SE, fa ny maingoka dia ilay ratsy fanahy amin'ity tranga ity. Ny akanjom-boninkazo Venom dia zavamia-tsaina mampiavaka azy amin'ny mpitaiza, manome hery matanjaka, haingana, fahalemena, ary hery mamelona azy. Amin'ny toe-javatra rehetra, ny fanentanana goavana indrindra amin'ny fialam-boly dia ny nanaisotra ny Spider-Man. Soa ihany ho anay fa mbola tsy nitranga izany.
Sary avy amin'ny Amazon
Darkseid dia manana tanjona iray, hanapaka an'izao tontolo izao. Tsy asa goavana izany, fa Darkseid ihany no mila mamantatra ny "Fomba fiady amin'ny fiainana" ary hahomby izy. Ny hetahetany amin'ny heriny dia mifanaraka amin'ny fahaiza-manaony. Manana herim-po sy haingam-pandeha izy ary manana Omega Beam mahery miaraka amin'ny fahefana tsy manam-petra. Raha hitan'i Darkseid io Fitoviana io, dia mino izy fa voahidy ao an-tsain'ny earthlings fa tsy misy ny tahotra.
Ra's al Ghul dia olo-malaza Batman Batman. Ny tanjony dia ny manadio ny tany sy mamerina izany amin'ny fanjakana Edena. Ny olana dia, ny ankamaroan'ny olombelona dia mila maty ao anatin'ilay dingana. Niaina fotoana lava be i Ra, ka nahafaty ny fahafatesana tamin'ny fampiasana ny Lazarus Pit. Ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-manaony eo amin'ny sehatry ny ady ara-batana sy ny sabatra dia mahatonga an'i Ra ho mpanohitra goavana, mendrika ny lohatenin'ny mpanendrikendrika.
Ny Green Goblin dia iray amin'ireo horonan-tsarin'i Spider-Man nandritra ny taona maro. Izy no tompon'antoka amin'ny fahafatesan'i Gwen Stacy, fotoana fohy sy indray izy. Ny Goblin dia manana tanjaka sy fahamaivanana, ary manana andian-javatra maro tsy hita isa. Olona maro no naka ny akanjon'ny Green Goblin, saingy vao haingana no nanazava ny Green Goblin tany am-piandohana, Norman Osborn dia velona sy tsara, miandry ny hitokona amin'ny Spider-Man sy ny mpiara-dia aminy.
Ary Sabah Nur dia mihevitra ny tenany ho ilay fiovàna am-boalohany ary noho izany ny mpitarika azy sy ny mpitondra azy. Ny apokalypsy dia iray amin'ireo mutant mahery indrindra manerantany, manana fahafahana hanova ny rafitra molekiola. Toa tsy mety maty koa izy. Ao amin'ny ho avy iray hafa, ny Apokalypse no nitondra ny tany. Manohy manatratra io tanjona io izy amin'izao fotoana izao, misafidy ny fotoana mety hipoitra sy hanehoana ny tenany.
Ahoana ny Mamorona Boky Iray
Mamorona sy mamoaka tantara amin'ny Kickstarter
Comic Book Publisher Profile
Famaritana ny Lisitry ny Boky Comic
Top 10 boky malaza indrindra amin'ny boky
Ny tantaran'ilay tantara momba an'i Stan Lee, mpanonta Comic
Ny mpamorona sy ny orinasa Top Comic Book
Top 9 Comic-Cons in US
Fiantombohan'ny fe-potoana - Mint
Ny fomba hahatongavana ho mpamoaka boky amin'ny Comic
Top Comic Book Convention Attractions
Ny Fiainanao-Ny Karma Mandoto ny Fitiavanao ny Fiainana?
Fahatakarana ny fototry ny Cryogenics
Inona no fiarovan-tena eo amin'ny ekipa mpilalao baolina kitra?
Tokony ho tsy ara-dalàna ve ny sigara?
Mahaiza Manara-baovao mba Hanaraka sy Hanompo!
ACT Comparative Score ho an'ny fidirana ao amin'ny Colleges Georgia
7 Ny toetran'ny mpampianatra ratsy
Vehivavy ao amin'ny Antenimieran-doholona
Ny fahasamihafana eo amin'ny kerobima, Amorita, ary anjely hafa ao amin'ny Art
Nahoana ny Coffee dia tsy mamoaka fofona tsara toy izany
Software ampiasaina amin'ny orinasam-pifindramonina: Hastus avy amin'i GIRO
Mifantoha amin'ny adjectives mifarana amin'ny -ic sy -ical
Ny fomba tokony hitenenana dia maneho ny mpampiantrano
Ahoana no hametrahana tanjona marim-pototra, azo zaraina ho an'ny famakiana ny famakiana
Ny fanampiana ireo mpianatra handray an-tsoratra
Ny paikady mahomby amin'ny teny Chemistry
Famerenana ny fambolena an-tsena any Bolivia sy Peroa
Ady Mangatsiaka: USS Nautilus (SSN-571)
Afaho Blackjack ho $ 100,000 isan-taona
Top Gag Gifts ho an'ny fety
Teknolojia ho avy
Inona no nitondra tany amin'ny Tea Tea Party any Boston?
Inona no atao hoe ARN?
Tantara mikasika ny zon'ny mpifindra monina any Etazonia
Inona no atao hoe Gaokao?